Ukuthunyelwa kwamasheya kuthuthukise lo mkhuba kwaqina, ne-Orient Overseas International inyuka ngo-3.66%, kwathi iPacific Shipping yenyuka ngaphezu kuka-3%. Ngokusho kweReuters, ngenxa yokwanda okuqhubekayo kwama-oda wabathengisi ngaphambi kokufika kwenkathi yezitolo yase-US, kukhuphula ingcindezi kuhla lokuthengiselana komhlaba,izinga lezimpahla zeziqukathi ezisuka eChina lisiya e-US likhuphuke laya phezulu ngaphezulu kwama-US $ 20,000 ngebhokisi elingamamitha angu-40.
Ukusabalala okusheshayo kwegciwane eliguqulwayo le-Delta emazweni amaningi kuholele ekwehleni kwezinga lokutholwa kwamakhonteyina emhlabeni jikelele. Isiphepho sakamuva ezindaweni ezisogwini oluseningizimu neChina naso sinomthelela. UPhilip Damas, umqondisi ophethe iDrewry, okuyinkampani ebhekela ezasolwandle, uthe, “Asikakuboni lokhu embonini yemikhumbi iminyaka engaphezu kwengu-30. Kwalinganiselwa ukuthi kuzohlala kuze kube unyaka ka-2022 waseShayina Wonyaka Omusha WamaShayina ”!
Kusukela ngoMeyi ngonyaka odlule, iDrewry Global Container Index inyuke ngama-382%. Ukwanda okuqhubekayo kwamanani ezimpahla olwandle nakho kusho ukwanda kwenzuzo yezinkampani zokuthumela. Ukuvuselelwa kwezomnotho ohlangothini lwesidingo somhlaba wonke, ukungalingani kokungeniswa nokuthunyelwa kwamanye amazwe, ukwehla kokusebenza kahle kwenani lamakhonteyina, namandla okuhambisa umkhumbi wamakhonteyina, kubhebhethekise inkinga yokushoda kwamakhonteyina okuholele ekukhuleni okukhulu kwamazinga ezimpahla zokuthwala.
Umthelela wokwanda kwempahla
Ngokuya ngemininingwane emikhulu ye-United Nations Food Organisation, inkomba yokudla emhlabeni ibilokhu inyuka izinyanga eziyi-12 zilandelana. Ukuthuthwa kwemikhiqizo yezolimo kanye nensimbi yensimbi nakho kufanele kwenziwe ngolwandle, futhi amanani entengo eluhlaza aqhubeke nokukhuphuka, nokungeyona into enhle ezinkampanini eziningi emhlabeni. Futhi amachweba aseMelika anokusalela okukhulu kwempahla.
Ngenxa yesikhathi eside sokuqeqeshwa kanye nokuntuleka kokuphepha emisebenzini yabasolwandle ngenxa yalolu bhubhane, kukhona ukushoda okukhulu kwabasolwandle abasha, futhi nenani labasolwandle bokuqala nalo lincishiswe kakhulu. Ukushoda kwabasolwandle kuqhubeka kuvimbela ukukhishwa komthamo wokuthumela. Ngokukhuphuka kwesidingo emakethe yaseNyakatho Melika, kuhambisana nokwenyuka kwamanani kawoyela emhlabeni jikelele, ukwehla kwamandla emali emakethe yaseNyakatho Melika kuzoqhubeka kukhule.
Izindleko zokuthumela zisakhuphuka
Ukulandela ukwehla kwamanani entengo yempahla eningi njengensimbi yensimbi nensimbi, ukwenyuka kwamanani entengo yokuthumela kulo mjikelezo nakho sekugxile kuzo zonke izinhlaka. Ngokusho kwabangaphakathi embonini, ngakolunye uhlangothi, izindleko zezimpahla zikhuphukile, okwenyuse kakhulu izindleko zezimpahla ezingenisiwe. Ngakolunye uhlangothi, ukuminyana kwempahla kwandise isikhathi futhi kwenyusa nezindleko zokuzifihla.
Ngakho-ke, kuzohlala isikhathi esingakanani ukuminyana kwempahla namanani entengo okuthumela?
I-ejensi ikholelwa ukuthi i-oda lokungeniswa kwamakhonteyina ngo-2020 ngeke lilinganiswe, futhi kuzoba nezigaba ezintathu lapho imikhawulo yokubuyiselwa kwamakhonteyina angenalutho, ukungenisa nokungenisa okungalinganiseli kahle, kanye nokushoda kweziqukathi kuzokwanda, okuzonciphisa kakhulu ukutholakala okusebenzayo. Ukuhlinzekwa okuqhubekayo nokufunwayo kuqinile, futhi izinga lezimpahla lizokhuphuka kakhulu. , Ukufunwa kwaseYurophu naseMelika kuyaqhubeka,futhi amanani aphezulu ezimpahla angaqhubeka kuze kube yikota lesithathu lika-2021.
“Intengo yamanje yemakethe yemikhumbi isemjikelezweni oqinile wobubanzi obukhuphukayo. Kubikezelwa ukuthi kuzophela u-2023, lonke inani lemakethe lingangena ebangeni lokubuyela emuva. ” UTan Tian uthe imakethe yokuhambisa nayo inomjikelezo, imvamisa umjikelezo weminyaka emi-3 kuye kwengu-5. Zombili izinhlangothi zokuthunyelwa kokuthunyelwa kanye nokufunwa kuhamba kakhulu, futhi ukululama ohlangothini lwesidingo kuvame ukuqhuba amandla ohlangothini lokuphakela ukungena kumjikelezo wokukhula eminyakeni emibili noma emithathu.
Muva nje, i-S & P Global Platts Global Executive Editor-Chief of Container Shipping uHuang Baoying uthe enkulumweni abe nayo neCCTV, “Kulindeleke ukuthi amanani emithwalo yempahla aqhubeke nokukhuphuka kuze kube sekupheleni kwalo nyaka bese ebuyela emuva ngekota yokuqala yonyaka ozayo. Ngakho-ke, amanani ezimpahla zekhonteyina asazohlala ngokuhamba kweminyaka. Phezulu. ”
LESISIQEPHU SASUSWA ECHINA KWEZOMNOTHO IVIKI